संकटलाई शक्तिमा वदल्दै लक्ष्मण हुमागाईको पुस्तक ‘प्रसारणः सिद्धान्त र विकास, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
संकटलाई शक्तिमा वदल्दै लक्ष्मण हुमागाईको पुस्तक ‘प्रसारणः सिद्धान्त र विकास
काठमाडौं । प्रसारण क्षेत्रमा २४ बर्ष पुरा गरेका प्रसारण विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईले नयाँ पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएका छन्। प्रसारणः सिद्धान्त र विकास नामक यो पुस्तक नेपाली भाषाको पहिलो प्रसारण सम्वन्धी पुस्तक हो। पुस्तकमा रेडियो, टेलिभिजन, चलचित्रका साथै आम संचार र प्रसारण पत्रकारिताबारे विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ। स्नातक र स्नात्तकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी र रेडियो तथा टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारहरु उक्त पुस्तकबाट लाभान्वित हुनेछन्।
आफुले स्नात्तकोत्तर तहको अध्ययनका क्रममा पुस्तकको अभाव देखेको र अझैसम्म पनि पुस्तक प्रकाशन नभएकोले आफैंले उक्त कार्य गरेको हुमागाईले बताएका छन्। उनले प्रसारण क्षेत्रमा नेपाली भाषाको मात्र होइन अंग्रेजी भाषाकै पुस्तक उपलव्ध छैनन् भन्दै भने, ‘यो अभावलाई पुर्ति गर्न मैले जमर्को गरेको हुँ।
भविश्यमा प्रसारण व्यवस्थापनको पुस्तक प्रकाशनको कार्यमा जुटेका हुमागाईले जानकारी दिए। नेपालमा प्रसारण क्षेत्रको इतिहास २० वर्ष मात्र भयो। यो क्षेत्रलाई धेरैले वुझेकै छैनन् भन्दै हुमागाईले थपे। यो क्षेत्र प्रभावकारी बनाउन आफु प्रयासरत रहेको बताए। आफुले प्रसारण क्षेत्रमै जीवन बिताएको बताउने हुमागाँई पहिलो पुस्तक प्रकाशनपछि प्राप्त प्रतिक्रियाबाट आफू अझ बढी उत्साहित भएको बताए।
नेपाल टेलिभिजनमा २०५१ सालमा कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा प्रवेश गरेका हुमागाई नेपाल टेलिभिजनमा रिपोर्टर, समाचार सम्पादक, वरिष्ठ समाचार सम्पादक हुदै महाप्रवन्धक सहित भएका थिए। महाप्रवन्धकको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेका हुमागाईले जनता टेलिभिजनको स्थापना र संचालन गरेका छन्।
उनी उक्त टेलिभिजनको पनि महाप्रवन्धकनै हुनुहुन्छ । आमसंचार एवं विज्ञको रुपमा परिचित हुमागाई विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन समेत गर्दे आउनु भएको छ । कुशल प्रशासक, संचार विज्ञ र संचार व्यवस्थापक हुमागाई संचार नीति निर्धारणको कार्यमा समेत उतिकै सक्रिय हुनुहुन्छ।
जनप्रशासन तर्फ स्नात्तकोत्तर गर्दा नेपालमा टेलिभिजन विज्ञापनमा शोध गरेका हुमागाईले आफ्नो शोधमा विज्ञापन रहित प्रसारण नीतिको चर्चा गरे। सन् २००६ मा गरेको उक्त अध्ययनकै कारण नेपालमा विज्ञापन रहित नीतिको पक्षमा आवाज उठाउनु थाल्नु भयो । जसमा विज्ञापन एजेन्सी संघको साथ रह्रयो।
आफु नेपाल टेलिभिजनको महाप्रन्धक भएको वेला सूचना तथा संचार मन्त्री र सचिवलाई उक्त विषयमा वुझाउन सफल भएको र त्यतिवेलाका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली समेत सकारात्मक भएपछि उक्त नीति ल्याउन सफल भएको हुमागाईले वताए।
आमसंचार तथा पत्रकारिताको स्नात्तकोत्तर तहको अध्ययनका क्रममा सार्वजनिक प्रसारण सेवा विषयमा सोध गरेका हुमागाईले सोहि विषयमा विभिन्न फोरममा आवाज उठाउनु भयो। आफै महाप्रवन्धक भएको बेला सहज पहुँचको कारण उक्त बिषयमा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको र गठनको क्रममा रहेको बताउने हुमागाई जीवनमा आफ्ना दुई सपना सरकारी नीतिमा परिणत भएकोमा खूशी व्यक्त गरे।
प्रसारण क्षेत्रमै विद्यावारीधि गर्दे गरेका हुमागाईले विद्यावारीधिको शोध प्रसारणको नियामक निकायमा गर्ने र सो समेत सरकारको नीतिमा पर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए।
शोकलाई शक्तिमा वदलेः हुमागाई
हुमागाईले आफ्नो पुस्तकको भुमिकालाई अरुले भन्दा भिन्न ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त भुमिकाका वारेमा जान्ने हाम्रो प्रयासमा हुमागाईले भने मैले शोक भनौ वा संकट भनौ त्यसलाई शक्तिमा वदले र त्यसैको परिणाम हो यो पुस्तक । हामी जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिलाई समय कम हुनेनै भयो। अझ पत्रकारितामा लाग्ने व्यक्तिलाई पुस्तक लेखन जस्तो समय लाग्ने काममा लाग्ने फुर्सद निकाल्न निकै कठिन हुन्छ भन्दै हुमागाईले भने मलाई भने एउटा संयोग मिल्यो र यो पुस्तक तयार भयो ।
नेपाल टेलिभिजनको महाप्रवन्धक रहेकै वेला वल्र्ड भिजन मिडिया वाईंग हाउसले नेपाल टेलिभिजनमा नक्कली बैक ग्यारेन्टी राखेछ । त्यो पनि ५ करोड भन्दा वढीको । विभिन्न मितिमा विभिन्न मुल्यका वैक ग्यारेन्टी मध्ये ५० लाखको बैक ग्यारेन्टी साट्न जाँदा वैकले भुक्तानी दिएनछ । लेखा शाखाले खवर गर्यो ।
बैक ग्यारेन्टी नक्कली भएको आशंका भयो के गर्ने । तत्काल वैकको केन्द्रिय कार्यालयमा जान निर्देशन दिए । बैकको केन्द्रिय कार्यालयले नक्कलीनै भएको निश्चित गर्यो । बैक ग्यारेन्टी राख्ने कम्पनिको व्यक्तिलाई खोज्न र समात्न निर्देशन दिए । तत्काल प्रहरीलाई खवर गरे । अर्को टोलीलाई उक्त कम्पनिले राखेको अरु कतिको वैक ग्यारेन्टी छ खोज्न निर्देशन दिए । खोज्दै जाँदा ५ करोड भन्दा वढीको भन्ने सूचना पाय । मन्त्री र सचिवलाई घटनाको वारेमा जानकारी गराए हुमागाईले भने।
घटनाको स्मरण गर्दे उनले भने २०७१ फागुन ६ गतेको घटना थियो त्यो । उक्त दिन सो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सकिएन । भोली पल्ट लेखा शाखाकै कर्मचारीलाई परिचालन गरि उक्त व्यक्तिलाई छफफलका लागि भनि मेरै कार्यालयमा वोलाए । संचालक समितिका सवै सदस्य, उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीलाई पनि वोलाए । संकटको वेला कसैको साथ पाउने कुरै भएन । सम्वन्धीत वाहेक खासै कोहि आएनन्।
कारण थियो फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको विदा । जे भएपनि उक्त वाईंगका अध्यक्षलाई आय लेखा शाखा प्रमुखले लिएर आए। योजना अनुसार प्रहरीलाई खवर गर्यौ र प्रहरीले मेरै कार्यकक्षवाट उनलाई पक्राउ गरेर लग्यो । भोलीपल्ट जाहेरी दिय। सोही दिन वैक ग्यारेन्टी कस्तो हुन्छ भन्ने देखे । मैले त्यस्ता बैक ग्यारेन्टी देखेकै थियन । यत्रो घटनामा कर्मचारीको संलग्नता वेगर सम्भव हुदैन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र लेखे । अख्तियारले छानविन थाल्यो।
हुमागाईले भने यता संचालक समितिले समेत छानविन समिति वनायो र छानविन थाल्यो । म आफैले विषयको जानकारी प्राप्त गरेको र जाहेरी दिएको भएपनि मेरो संलग्नताको वारेमा समेत चर्चा हुन थाल्यो । आशंका हुनु अस्वाभाविक थियन । जसरी मैले तलका कर्मचारीको संलग्नताको वारेमा छानविन गर्न अख्तियारलाई भने मेरो माथील्लो निकायले मलाई शंकको घेरामा राख्नु ठिकै हो भन्ने ठाने।
मलाई केहि समय मन्त्रालयमा हाजिर हुन र छानविनलाई सहयोग गर्न भनियो । मैले स्वीकार गरे । मलाई मन्त्रालयमा लगियो । प्रहरी, संचालक समिति र अख्तियारको छानविन सकिन ९ महिना लाग्यो । सवैतिरवाट मेरो र हाम्रा कर्मचारीको संलग्नता नभएको प्रमाणीत भएपछि म पुनः नेपाल टेलिभिजन फकिए महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी सम्हाल्न।
मन्त्रालयमा हाजिर हुने र काम केहि नहुने भएपछि हुमागाईले आफुले घरलाईनै कार्यालयमा परिणत गरेको वताउनु भयो । नियमित ९ वजे खाना खाने र कार्यालय जाने समयमा आफ्नो कार्यकक्षमा गई अध्ययन गर्न थाले । दिउसो २ बजे मन्त्रालय जाने र ३ बजे सम्ममा घर फर्किएर लेखनलाई निरन्तरता दिय । परिणाम स्वरुप यो पुस्तक निकाल्न सफल भए।
त्यसैवेला लेखेको प्रसारण व्यवस्थापनको पुस्तक पनि छिट् प्रकाशनमा आउने वताउदै हुमागाईले भने यो संकट वा शोकलाई मैले शक्तिमा परिणत गरे । भृकुटी प्रकाशनले प्रकाशनमा ल्याएको उक्त पुस्तक करिव २ सय ५० पेजको छ । पुस्तक प्रकाशनमा सहयोग गर्ने सवैप्रति आभार व्यक्त गर्दे हुमागाईले भने मलाई कार्य विहिन वनाउँदा पनि मैले प्रसारण क्षेत्रमै योगदान गरे । जीवन यसैमा वित्ला जस्तो छ।